छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पर्दा बाबुआमा खुशीले रोए !!! – News Nepali Dainik
छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पर्दा बाबुआमा खुशीले रोए !!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १२, २०७७ समय: १७:३१:५५
छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पर्दा बाबुआमा कति खुशी होलान् ? चीनका एक बाबुले आफ्नी छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पारेपछि खुशीले रोएका छन् । चार वर्षकी छोरी हराएका ती बाबुले अन्ततः दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी छोरी फेला पारेपछि निकै भावुक भए ।
१९९४ मा वाङ मिङचिङ नामक व्यक्ति र उनकी पत्नी लिउ देङयिङ चेङ्दुको सडक किनारामा बसेर फलफूल बेच्ने गर्दथे।एक दिन वाङ खुद्रा साट्न गएका बेला चार वर्ष पुग्न १० दिन मात्र बाँकी रहेकी उनीहरुकी छोरी वाङ चिफेङ हराइन्।
कतिसम्म भने कुनै दिन हराएकी छोरी आफूहरुलाई खोज्दै आउने आशामा उनीहरुले सो इलाका पनि कहिल्यै छोडेनन्। छोरी खोज्न उनीहरुले कुनै कसर बाँकी राखेनन् तर पनि समयमा भेटेनन् । अन्तत छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पारे । कतिसम्म भने कुनै दिन हराएकी छोरी आफूहरुलाई खोज्दै आउने आशामा उनीहरुले सो इलाका पनि कहिल्यै छोडेनन्।
Last Updated on: February 24th, 2021 at 5:31 pm